Apple Inoburitsa "Regedza Musarudzo" Shanduro yeWOSOS uye tvOS | Ndinobva mac
Apple inotangisa "Sunungura Musarudzo" vhezheni yeWOSOS uye tvOS
Masikati ari kugadzirwa maererano nenhau dzakanangana neApple uye ndeyekuti mushure me "kukokwa kwepamutemo" kwechiitiko cheMac nyowani nemaARM processor uye pamwe zvimwe zvakashamisa, iyo Cupertino femu yakaburitsa iyo Sunungura Mushanduri shanduro dzeWOSOS 7.1 uye tvOS 14.2. Idzi shanduro dzevagadziri dzaimbozivikanwa seGM kana Goridhe Tenzi, saka hazvireve kuti iwo mavhezheni akasiyana neevamwe vekare, ivo ndeavo chete vasati vatangwa zviri pamutemo shanduro.
Mune ino kesi, zvinyorwa zvevagadziri zvinoratidza shanduko mukugadzikana uye chengetedzo yeese masystem asi hapana shanduko dzakakosha mumabasa kana zvakafanana. Idzi shanduro dzinogona kuburitswa vhiki mushure mekuuya kwepamutemo kweMacOS Big Sur, vanogona kutosvika par sezvo macOS iri kunonoka kusvika kuunzwa kweMac nyowani. Chipiri chinotevera, Mbudzi 1.
Apple inoda kuti idzi dzekupedzisira kana dzepedyo-dzekupedzisira shanduro mugadziri betas dzive dzichishanda mushe kana dzaburitswa kuzviuru zvevashandisi, uye ndosaka ichinzi Sunungura Musarudzo izvo hazvisi zvimwe kunze kwekupedzisira vhezheni asi chete kune vane mvumo vanogadzira. Hatitende kuti idzi shanduro dzakasiyana zvakanyanya neshanduro dzekupedzisira kuti isu tichagamuchira vakasara vevashandisi munguva pfupi, kunze kwekunge vasina mabugs kana zvikanganiso
Parizvino zvese zviri munzira yekuuya kweshanduro nyowani kuApple Watch uye Apple TV, ikozvino zvinoramba zvichionekwa kuti ndeipi zuva ravanomisikidzwa zviri pamutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inotangisa "Sunungura Musarudzo" vhezheni yeWOSOS uye tvOS
Apple UK zvitoro zvakavharwa kwemavhiki mana
Maitiro ekuchengetedza peji rewebhu muSafari seCherechedzo paMac